Madaxa la dagaalanka musuqa oo ka warbixiyay waxqabadka guddigaasi | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Madaxa la dagaalanka musuqa oo ka warbixiyay waxqabadka guddigaasi
Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka Musuq-maasuqa Abuukaate Maxamed Xuseen Xaamud ayaa manta ka warbixiyay kulan ku aadan la dagaalanka musuqa oo uu uga qeybgalay Dalka Masar iyo sida dowladda iyo shacabka Soomaaliya ay uga qeyb qaadan karaan xalka arrintaasi.
Guddoomiyaha oo manta ka qeybgalay barnaamijka kulanka todobaadka ee warbaahinta qaranka ayaa xusay in dhowaan ay dalka Masar kaga qeybgaleen shir ku saabsaanaa la dagaalanka musuqa oo ay ka qeybgaleen dalal ka mid ah caalamka.
Guddoomiyuhu,waxa uu qiray in ay jiraan qorshe kutalagal oo la doonayo in lagula dagaalamo musuqa ,gaar ahaan mudada u dhaxeysa 2021- 2023-ka. isagoo intaa raaciya in ciribtirka musuqa uu yahay mid u baahan xal waafi ah oo ay ka qeybgalaan dowladda iyo guud ahaan qeybaha bulshada ee dalka.
Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka Musuq-maasuqa Abuukaate Maxamed Xuseen Xaamud,waxa uu xusay in marka la helo iskaashi u dhaxeeya hey’adaha ammaanka,kuwa garsoorka iyo warbaahinta la gaari karo xal ku yimaada ilaalinta maaliyadda dalka iyo guud ahaan adeegyada umadda.
Previous articleWasiirka Howlaha guud iyo madax kale oo booqday safaaradda Soomaaliya ee Masar
Next articleJubbaland oo shaacisay qabashada doorashada lix kursi oo Aqalka Hoose ah